Raspberry Pi vs Servers NAS: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato | Qalab bilaash ah
Raspberry Pi vs NAS Servers: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Hadaad kafekerayso isticmaal adeegayaasha NAS, markaa waa inaad ogaataa inaad haysato dhowr ikhtiyaar oo farahaaga ah. Laga soo bilaabo adeegsiga Raspberry Pi oo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah, ha ahaato kaarka SD laftiisa ama xusuusta USB -ga dibedda, oo loo qaabeeyey inay u adeegto adeegga kaydinta shabakadda, ilaa adeegsiga adeegga kaydinta daruur ee bixiyaha, sida martigelinta dabacsan ee Webempresa, iyada oo loo marayo qalabka Xalalka NAS.
Sida a websaydhka, Adeegayaasha NAS waxay noqon karaan kuwa ugu faa'iidada badan maalmahan. Ama si aad u kaydiso xogta aad ka heli karto meel kasta waqti kasta, si aad ugu isticmaasho kuwan nuqullo ama nuqullo kayd ah, sida keydinta warbaahinnadaada, iyo waxyaabo kaloo badan. Kala -duwanaanshaha ayaa ugu badan, laakiin waa inaad wax badan ka barataa xalalka jira si aad u dooran karto midka ugu fiican baahiyahaaga ...
1 Waa maxay server?
1.1 Sida loo diro server -yada
1.2 Noocyada serverka
2 Adeegga NAS: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
2.1 Maxaan ku samayn karaa NAS?
2.2 Sida loo doorto adeegayaasha ugu fiican NAS?
3 Raspberry Pi: Midida Ciidanka Swiss -ka ee sameeyayaasha
3.1 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka Raspberry Pi oo ka soo horjeeda server -yada NAS ee u heellan
Waa maxay server?
Waa muhiim in la ogaado waa maxay server Markaa waad ogtahay inaysan dhammaantood ku jirin xarumaha xogta waaweyn, laakiin waxaad sidoo kale ku hirgelin kartaa kombuyuutarkaaga, Raspberry Pi, iyo xitaa aaladda moobiilka.
Xisaabinta, server ma aha wax ka badan kombuyuutariyadoon loo eegin baaxaddeeda iyo awooddeeda. Kombiyuutarkani wuxuu ka koobnaan doonaa qaybaha lagama maarmaanka u ah qalab kasta, iyo sidoo kale nidaamka hawlgalka iyo software u adeega siinta adeeg (markaa magaceeda). Tusaale ahaan, waxaad yeelan kartaa adeegyo NAS ah oo u heellan kaydinta shabakadda, adeegayaasha webka si ay u martigeliyaan bogag, adeegyo xaqiijin, iwm.
Wax kasta oo adeega uu bixiyo adeegaha, waxaa jiri doona qalabyo kale oo ku xirnaan doona si ay uga faa'iidaystaan ​​adeegga ay bixiyaan (model-macmiilka). Aaladahaan kale waxaa loo yaqaan macmiil waxayna sidoo kale ka imaan karaan taleefanka casriga ah, Smart TV, PC, iwm.
Sida loo diro server -yada
Qaabka macmiilka-server-ku waa fikrad fudud, taas oo server-ku had iyo jeer sugi doono macmiil ama macaamiil si uu u codsado. Laakiin server ayaa sheegay siyaabo kala duwan ayaa loo hirgelin karaa:
Wadaag: sida caadiga ah waxaa loola jeedaa martigelinta, ama martigelinta webka, ee la wadaago. Taasi waa, halkaas oo dhowr websaydh lagu martigeliyo oo inta badan ay leeyihiin milkiileyaal kala duwan. Taasi waa, qalabka server -ka (RAM, CPU, kaydinta, iyo baaxadda) ayaa la wadaagaa.
Faa'iidooyinka: inta badan way ka jaban yihiin marka lala wadaago dadka kale. Uma baahnid aqoon farsamo sare, way fududahay in la bilaabo.
Dhibaatooyin. In la wadaago, faa'iidooyinka ayaa laga yaabaa inaysan ahayn kuwa ugu fiican.
Maxaa loogu talagalay? Waxay ku fiicnaan karaan baloogyada bilowga ah ama degellada leh wax ka yar 30.000 oo booqasho bishii. Xataa marinnada ganacsiga yar yar.
VPS (Server Private Private Server): waxay noqonayaan kuwo aad iyo aad caan u ah. Asal ahaan waa kombiyuutar "jajaban" oo ku jira server -yo kala duwan. Taasi waa, mashiin jireed oo khayraadkiisa lagu qaybiyey dhowr mashiin oo dalwaddii ah. Taasi waxay ku reebaysaa inta u dhaxaysa kuwa la wadaago iyo kuwa u heellan. Taasi waa, isticmaale kasta wuxuu yeelan karaa nidaam qalliin naftooda, iyo kheyraadka (vCPU, vRAM, kaydinta, shabakadda) oo aysan ku qasbanaan doonin inay cidna la wadaagaan, iyagoo awood u leh inay u maareeyaan VPS sidii inay tahay mid u go'an.
Faa'iidooyinka: waxay siisaa xasilooni iyo isku dheelitirnaan. Waxaad marin u heli doontaa xididka adeegaha (dhagartaada). Waxaad rakibi kartaa ama ka saari kartaa software kasta oo aad rabto. Xagga qiimaha, way ka jaban yihiin kuwa u go'ay.
Dhibaatooyin: maareynta, dhejinta iyo amniga ayaa mas'uul ka noqon doona. Haddii dhibaatooyin soo baxaan, waa inaad sidoo kale xallisaa, markaa waxaad u baahan tahay aqoon farsamo oo ka weyn tan la wadaago. In kasta oo ay ka badan tahay tan la wadaago, haddana waxay sii wadaysaa inay leedahay xaddidaadyo gaar ah marka la barbar dhigo kuwa u go'ay.
Maxaa loogu talagalay? U fiican shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee doonaya inay martigeliyaan degelkooda ama adeegyadooda.
Go'an: iyaga dhexdooda waxaad ku yeelan doontaa xakamaynta deegaanka, adiga oo aan lahayn "deris dhibsanaya". Taasi waxay ka dhigan tahay inaad mashiinka kuu heli doonto, adigoo awood u leh inaad u maamusho sidaad rabto oo aad u dhisto kaabayaasha aad u baahan tahay.
Dhibaatooyin: way ka qaalisan yihiin waxayna u baahan doonaan ilo farsamo si loo maareeyo. Waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah.
Maxaa loogu talagalay? Ku habboon barnaamijyada webka, bogagga eCommerce, iyo adeegyada yeelan doona gaadiid aad u sarreeya.
Iskiis: kuwii hore dhammaantood waxay ahaayeen server -yo ay bixisay shirkad daruur. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale yeelan kartaa server kuu gaar ah. Tani waxay yeelan kartaa faa'iidooyin aad u weyn, maadaama aad noqon doonto milkiilaha qalabka, sare u qaadaya asturnaanta iyo amniga xogtaada. Si aad u hesho server kuu gaar ah, waa la samayn karaa, sidaan hore u soo sheegay, iyadoo la adeegsanayo PC kasta, aalad moobayl, iyo xitaa Raspberry Pi. Dabcan, haddii aad u baahan tahay wax intaas ka xoog badan, waa inaad soo iibsataa server -yo sida kuwa ay bixiyaan shirkadaha sida HPE, Dell, Cisco, Lenovo, iwm, si aad u abuurto "xarunta xogta" adiga kuu gaar ah, cabbir kasta ...
Faa'iidooyinka: waxaad noqon doontaa milkiilaha adeegaha, markaa waxaad yeelan doontaa xakameyn buuxda. Xataa marka la qiyaaso ama la beddelo qaybaha qalabka.
Dhibaatooyin: waa inaad daryeeshaa dhammaan wixii dhib ah ee soo bixi kara, dayactir, dayactir, iwm. Intaa waxaa dheer, tani waxay leedahay qiimo koror, labadaba iibsashada qalabka daruuriga ah iyo shatiyada, iyo sidoo kale isticmaalka korontada ee mashiinku yeelan karo, iyo bixinta IPS haddii aad u baahan tahay baahin degdeg ah.
Maxaa loogu talagalay? Waxay waxtar u yeelan kartaa ururada, shirkadaha, iyo dawladaha u baahan inay si guud gacanta ugu hayaan xogta, ama adeegsadayaasha doonaya inay dejiyaan wax aad u qaas ah oo aysan xogtooda uga tagin gacanta dadka kale.
Waxaa jiri kara kala duwanaansho kuwaan dhexdooda ah, gaar ahaan adeegyada iyo tas -hiilaadka ay bixiyaan qaar ka mid ah bixiyeyaasha hadda jira, sida adeegyada la maareeyo si aadan wax uga welwelin, xalalka amniga, rakibayaasha fudud si loo rakibo nidaamyada hawlgalka ama software -ka aan lahayn aqoon, iwm.
Qeybtii hore waxaad awood u yeelatay inaad ogaato siyaabaha loo hirgeliyo server -ka, si kastaba ha ahaatee, iyagana waa la qori karaa hadba nooca adeega amaahday:
Shabakadaha internetka: Nooca server -ka ayaa aad loo jecel yahay. Hawsheeda ayaa ah inay martigeliso oo abaabusho bogagga shabakadda si macaamiisha, oo leh daalacashada webka ama gurguurayaasha, ay ku heli karaan hab -raaca sida HTTP / HTTPS.
Server faylasha: kuwa loo isticmaalo in lagu kaydiyo xogta macmiilka si loo soo geliyo ama looga soo dejiyo shabakadda. Adeegyadan dhexdooda waxaa ku jira noocyo badan, sida adeegayaasha NAS, adeegayaasha FTP / SFTP, SMB, NFS, iwm.
Adeegayaasha Emailka: adeegyada ay kuwani bixiyaan waa hirgelinta hab -maamuuska iimaylka si ay macaamiishu ula xiriiraan, u helaan ama u diraan emayl. Tan waxaa lagu gaaraa softiweer si loo hirgeliyo borotokoollada sida SMTP, IMAP, ama POP.
Adeegaha keydka xogtaIn kasta oo lagu kaydin karo faylasha dhexdooda, haddana noocani wuxuu u kaydiyaa macluumaadka hab kala sarreeya oo habsami leh keydka xogta. Qaar ka mid ah softiweerka si loo hirgeliyo keydka xogta waa PostgreSQL, MySQL, MariaDB, iwm.
Server wakiil ah: waxay u adeegtaa sidii isgaarsiinta isgaarsiinta ee shabakadaha. Waxay u dhaqmaan sidii dhexdhexaadiye waxaana loo isticmaali karaa in lagu shaandheeyo taraafikada, xakamaynta baaxadda, qaybsiga culeyska, kaydinta, qarsoodiga, iwm.
Server server: Ujeeddadeedu waa inay bixiso adeeg xallinta magaca domainka. Taasi waa, si aadan u xasuusan IP -ga server -ka aad rabto inaad gasho, wax daal badan oo aan caqli badnayn, waa inaad isticmaashaa magaca martida loo yahay (domain iyo TLD), sida www.example, es , iyo server -ka DNS wuxuu baari doonaa keydkiisa IP -ga u dhigma magaca domainka si loo oggolaado marin u helka.
Adeegaha xaqiijinta: waxay u adeegaan inay bixiyaan adeegyo marin u helka nidaamyada qaarkood. Badanaa waxay ka kooban yihiin xog -ururin ay ku qoran yihiin aqoonsiyada macaamiisha iyo. Tusaalaha tan waa LDAP.
kuwa kale. Tusaale ahaan, waxaa jira hoy ku siinaya xog -ururin, email, iwm.
Adeegga NAS: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
ka NAS (Kaydinta Kuxiran Shabakadda) waxay yihiin aalado wax lagu kaydiyo oo ku xiran shabakad. Tan waxaad ku yeelan kartaa hab aad ku martigeliso xogta oo aad ku haysato gacantaada wakhti kasta. Noocan server -ka ah waxaa lagu fulin karaa iyadoo la adeegsanayo softiweer aalado badan, sida PC, aaladda mobilada, Raspberry Pi, bixinta adeegga kaydinta daruuriga, iyo xitaa iibsashada NAS -kaaga (oo aan diiradda ku saari doono qaybtan ).
Kuwani NAS waxay sidoo kale yeelan doonaan CPU, RAM, kaydinta (SSD ama HDD), Nidaamka I / O, iyo nidaamkaaga hawlgalka. Intaa waxaa dheer, suuqa waxaad ka heli kartaa qaar diiradda saaraya dadka isticmaala guriga, iyo kuwo kale oo loogu talagalay bay'adaha ganacsiga oo leh awood iyo waxqabad weyn.
El shaqeynaya ee adeegayaashan waa sahlan tahay in la fahmo:
Nidaamka: Adeegayaasha NAS waxay leeyihiin qalab iyo nidaam hawlgal oo si dhammaystiran ugu qaban doona dhammaan macmiilka. Taasi waa, marka macmiilku go'aansado inuu soo dejiyo, tirtiro, ama soo dejiyo xogta, wuxuu daryeeli doonaa dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah tan, isagoo siinaya macmiil interface fudud.
Kaydinta: waxaad ka heli kartaa boosas kala duwan. Mid kasta oo ka mid ah boosaska waxaad gelin kartaa meel wax lagu kaydiyo si loo ballaariyo awoodeeda, ha noqoto HDD ama SSD. Darawallada adag ee la jaanqaadaya waxay si isku mid ah u yihiin kuwa aad ku isticmaashid PC -gaaga caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira taxane gaar ah oo loogu talagalay NAS, sida Taxanaha Cas Cas ee Galbeedka, ama Seagate IronWolf. Haddii aad rabto baaxad ganacsi, waxaad sidoo kale leedahay WD Ultrastar iyo Seagate EXOS.
Red: Dabcan, si looga helo macaamiisha, waa inay ku xirnaataa shabakadda. Ama kaybalka Ethernet ama farsamada wireless -ka.
Maxaan ku samayn karaa NAS?
Lahaanshaha adeegayaasha NAS waxay kuu oggolaaneysaa inaad lahaato 'daruur' kaydinta gaarka kuu ah, oo yeelan karta faa'iidooyin waaweyn. Inta u dhaxaysa codsiyada kasoo muuqday Waxay yihiin:
Sida dhexdhexaadinta kaydinta shabakadda: waxaad u adeegsan kartaa inaad ku kaydiso wax kasta oo aad u baahan tahay, tusaale ahaan, ka kaydi sawirradaada aaladdaada moobiilka, u isticmaal sida galalka onlaynka ah ee faylasha farriimaha badan leh, adeeggaaga qulqulka ah ee Netflix oo kale ah oo martigelinaya filimada aad jeceshahay iyo taxanaha (Plex ayaa maamuli kara tan , Kodi,…), Iwm
Bakup: waxaad awoodi doontaa inaad nuqullo nuqul ah ka samayso nidaamyadaada NAS -kaaga si fudud. Habkan waxaad mar walba ku hayn doontaa keydka farahaaga oo waxaad dammaanad qaadi doontaa in xogtaadu ku jirto server la yaqaan.
share: waxaad u adeegsan kartaa inaad la wadaagto dhammaan noocyada faylasha asxaabtaada iyo qoyskaaga, ama cidda aad rabto. Keliya soo geli waxaad rabto inaad wadaagto oo waxaad siin kartaa marin u helka macaamiisha kale si ay u helaan ama u soo dejistaan.
martigelin: waxa kale oo aad u adeegsan kartaa sidii marti -geliye webka si aad goobtaada ugu keydiso. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay in adeegayaasha NAS ay ku koobnaan doonaan xaddiga shabakaddaada. Taasi waa, haddii aadan lahayn khad degdeg ah, oo kuwa kale ay galayaan NAS, waxaad arki doontaa dhibco waxqabad oo muuqda. Iyada oo la adeegsanayo fiber optic -ga tani aad baa loo hagaajiyay.
kuwa kale: Waxaa sidoo kale jira server -yada NAS oo u adeegi kara sidii FTP server, si ay u martigeliyaan keydka macluumaadka, qaarkoodna xitaa waxaa ku jira howlo loogu talagalay VPN.
Sida loo doorto adeegayaasha ugu fiican NAS?
Markaad iibsaneyso server -kaaga NAS, waa inaad gaartaa qaar astaamaha farsamada Si aad u hubiso inaad si fiican wax u iibsatay:
hardware- Waxaa muhiim ah inaad haysato CPU leh waxqabad wanaagsan iyo qaddar wanaagsan oo RAM ah si aad u firfircoon. Waxay ku xirnaan doontaa sida adeegani u siman yahay, in kasta oo wax walba ay ku xirnaan doonaan xoogaa baahiyahaaga gaarka ah.
Bays / Kaydinta: fiiro gaar ah u yeelo tirada iyo nooca bays (2.5 ″, 3.5 ″,…) ee is -dhexgalka hore u lahaa (SATA, M.2,…). Qaar ka mid ah adeegayaasha NAS waxay taageeraan rakibidda tiro badan oo darawallada adag si kor loogu qaado awoodda (1TB, 2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB,…). Waxaa sidoo kale jira kuwa leh suurtogalnimada in loo habeeyo nidaamyada RAID si ay u noqoto xog -u -dhimis. Xusuusnowna inay muhiim tahay in la doorto darawalada adag ee NAS-ka gaarka ah, kuwaas oo loo habeeyay inay taageeraan culeysyo badan iyo waqti go'an:
Isku xirka shabakada: arrin kale oo lagu xisaabtamo si loogu xiro server -kaaga macaamiisha sida ugu wanaagsan.
Nidaamka hawlgalka iyo barnaamijyada. Guud ahaan, habka aad uga dhex gudubto menusyada iyo ikhtiyaarada aad ku leedahay farahaaga ayaa ku xirnaan doonta. Waxay ku xiran tahay bixiyaha.
Noocyada ugu fiican- Qaar ka mid ah sumcadaha aadka loogu taliyay ee adeegayaasha NAS waa Synology, QNAP, Western Digital, iyo Netgear. Talooyinka wax iibsiga qaarkood waa:
Isku xirka Western Digital My Cloud Home Ethernet iyo ilaa 4TB (guriga)
Synology DS720 + 2 Bay (loogu talagalay ganacsiyada yaryar ama adeegsadayaasha aadka u dalbanaya)
QNAP 4 Bay iyo ilaa 8 TB (oo loogu talagalay xirfadleyda)
Raspberry Pi: Midida Ciidanka Swiss -ka ee sameeyayaasha
Xalka raqiis ah ee adeegayaasha NAS haddii aadan qabin baahiyo waaweyn ayaa ah inaad isticmaasho SBC -gaaga si aad u fuliso midkood. Raspberry Pi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad haysato NAS -kaaga jaban ee gurigaaga. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya:
Dhexdhexaadinta kaydinta (waxaad isticmaali kartaa kaadhka xusuusta laftiisa ama dhexdhexaadinta kaydinta USB ee ku xidhan Pi -gaaga
Software si loo fuliyo adeegga. Waxaad ka dooran kartaa dhowr mashruuc, xitaa il furan, sida iska leh Cloud, NextCloud, iwm.
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka Raspberry Pi oo ka soo horjeeda server -yada NAS ee u heellan
Haddii aad go'aansato inaad ku raaxaysato faa'iidooyinka adeegayaasha NAS, waa inaad qiimeysaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha taasi waxay ku yeelan kartaa hirgelinteeda Raspberry Pi:
Barashada inta lagu jiro nidaamka hawlgelinta
Cabbirka is haysta
Way adag tahay dejinta iyo dayactirka
Wuxuu u baahan yahay inuu had iyo jeer ku xirnaado shabakadda iyo korontada (isticmaalka)
Maadaama aysan ahayn aalad NAS u go'an, waxaa laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin haddii aad rabto inaad u isticmaasho SBC mashaariic kale
En gabagaboHaddii aad u baahan tahay adeegga NAS ee ku -meelgaarka ah ee aasaasiga ah oo raqiis ah, Raspberry Pi wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu fiican si aadan u maalgelin lacag aad u badan. Dhinaca kale, adeegyada leh awoodda kaydinta, xasilloonida, baaxadda, iyo waxqabadka, markaa waxaa ugu wanaagsan inaad iibsato server -kaaga NAS ama aad shaqaalaysiiso adeegga kaydinta daruurta ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Raspberry Pi vs NAS Servers: Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
1n4148: wax walba oo ku saabsan diode ujeeddo guud
Qaangaadhnimada la qorsheeyey: farshaxanka khiyaanada si aad wax badan u kharash garayso ...